Wararka - Talo Nadiifinta Slipper 1
Slipper Cku tiirsan Tip 1
Cimiladu si dhakhso ah ayay u kululaan doontaa, gaar ahaan Guangdong aaggaas, waxay gashatay gacmo gaaban, hawo furan. Dad badan ayaa ka soo bixin doona kabaha caagga ah, laakiin aad bay u wasakhoobeen dhawr bilood ka dib, wasakhuna way adag tahay in la dhaqo.
Dhowr qof oo aan dheg jalaq u siinin ayaa sibiq nadiif ah u nadiifin kara si fudud, laakiin waxay saameyn ku yeelan karaan quruxda kaliya maahan, waxaana laga yaabaa inay ku keenaan cudurka beriberi. Maanta waxaan jeclaan lahaa inaan idinla wadaago khiyaamo yar si ay u sahlanaato nadiifinta kabahaaga.
Marka hore waxaan diyaarinnaa weel, waxaan ku darnaa biyo diirran, ka dibna waxaan ku tuujin qayb ka mid ah daawada cadayga. Ka dibna ku dar khalka cad oo si fiican isku walaaq. Ku cadaadi dareeraha weelka lagu dhaqo. Sibib -siibiyaha ayaa si toos ah loogu ridi karaa biyaha muddo 10 daqiiqo ah.
Cadayga ilkaha waxaa ku jira wakiil caddeeya iyo wakiil wax qarxiya, wuxuu si wax ku ool ah uga saari karaa wasakhda ay adag tahay in laga saaro, khalka cad wuxuu leeyahay saamaynta jeermis -dile, wuxuu ku dili karaa bakteeriyada dacasyada, wuxuu ka hortagi karaa xirashada kabaha si uu u gaaro cagaha cayaaraha. Awoodda maydhista nuxurka nadiifka ah waa mid aad u xoog badan, u isticmaal inaad ku maydho siibasho si ay u gaadho saamayn nadiif ah sidoo kale.
Slippers -ka ku jira geedi -socodka bakhtiinta lakabka qoto dheer ee wasakhdu waxay noqon doontaa mid jilicsan, markan oo leh burush si aad mar kale u cadaydo kabaha, waxaad ogaan doontaa in kabuhu noqdaan kuwo cusub.
Sug ilaa kabaha ay mar kale wasakhoobaan, ka dibna isticmaal habkan si aad u nadiifisid kabaha, oo marna ma xiran doontid kabo wasakh leh.
Haddii aad haysato kabo dacas ah oo gurigaaga ah, isku day habkan fudud oo raqiis ah.
Waqtiga dhejinta: Aug-17-2021
Carwadii 129aad ee Kanton oo si guul ah loo soo xiray